Noafahana ilay Bilaogera Ekoateriana Paúl Moreno · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2012 7:51 GMT
Nolazain'i Moreno ao amin'ny blaoginy [es] fa mahita lavaka eo amin'ny rafitra izy rafitra izy ka mora taminy ny niditra tao amin'ny mombamomba ny filoha Rafael Correa. Ankoatra izany, lahatsoratra iray ao amin'ny hackeruna [es] no manondro fa tamin'ny 7 marsa (ny datin'ny nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny datoseguro.gob.ec) dia efa tsikaritra fa mora tafihana ilay sehatra.
Ny 30 Novambra, nanao fanambarana an-gazety [es] ny Birao Nasionaly misahana Arisivam-Bahoaka (DINARDAP [es]) milazalaza ny antony hanenjehana an'i Moreno, araka ny lalàna, miaraka amin'ny biraon'ny fampanoavana.
Ho fanehoan-kery fanohanana ilay bilaogera sy ny fiarovana ny vahoakan'i Ekoatera, dia nisovoka tranonkala [es] maromaro na an'ny fanjakana na an'olo-tsotra tamin'ny 30 Novambra teo ny Ecuador Cyber Army (@EcuCyberArmy).
Maro ireo fitaovam-baovao, tahaka ny Diario Hoy [es], Expreso [es] ary ny El Universo [es] no namoaka ny vaovaon'ny fisamborana. Manazava ny fihetsiky ny fampitam-baovao tamin'ny fisamborana ilay bilaogera tao amin'ny bilaoginy [es] i Rafael Méndez Meneses (@kevinhurlt) [es].
Tamin'ny 1 Desambra, dia nandefa taratasy [es] mangataka famindram-po noho ny ” tsy fifankahazoan-kevitra vokatry ny fampiasana amin'ny tsy antony ny anaran'Atoa Rafael Correa” i Paúl Moreno. Nilaza tamin'ny farany ny filoha Correa fa tsy manana na inona na inona afenina ka niantso ho fanafahana ilay bilaogera nandritra ny fandaharana fanaony isaky ny Asabotsy:
Taorian'ny fanafahana azy dia nanoratra izao tamin'ny mpanaraka azy ao amin'ny Twitter i Paúl Moreno (@paulcoyote) [es] :
@paulcoyote: Afaka aho. Misaotra ny rehetra. #LiberenaPaulCoyote pic.twitter.com/2lvMKeGd
Saripika nozarain'i @paulcoyote tao amin'ny Twitter taorian'ny famotsorana azy
Nisaotra ny mpanaraka azy ao amin'ny Twitter ho fanohanana ny rainy koa ny zanakalahin'i Moreno, antsoina hoe Pulpo Potter (@pulpineitor) [es]:
@pulpineitor: Misaotra ny rehetra noho ny fanohanana ny #LiberenaPaulCoyote efa tafavoaka izy izao ary salama tsara. Nanohina ny fo noho ny fanohananareo.
Carlos Correa (@calu) [es] nitatitra ny fivoaran-draharaha, hatramin'ny fotoana nisamborana an'i Paúl Moreno ka hatramin'ny famotsorana azy, tamin'ny alalan'ny naoty [es] an-tserasera nasiany fanavaozam-baovao imbetsaka.